Inona no fomba haingana Travel In Eoropa? | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona no fomba haingana Travel In Eoropa?
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 18/02/2020)
Ny zavatra voalohany ny olona no mihevitra rehefa hanontany tena Inona no fomba haingana ny mandeha any Eoropa no manidina. Fa izahay tsy manaiky! Raha ny tena dia mety ho haingana kokoa manidina, misy na inona na inona miadana noho ny seranam-piaramanidina mba mametra ny habetsaky ny fotoana Travel raha ny marina afa-. Koa mifarana ny ho lafo kokoa Rehefa nahatonga ny fiara mitaky mba ho any amin'ny seranam-piaramanidina, koa! Aza mahazo antsika na dia nanomboka teo amin'ny lalana be mponina, humongous ny terminal, ny interminable tsipika izay hijery tsara sy mandroso amin'ny alalan'ny fiarovana, ary Entana milaza fahatarana dia rehefa tonga hametraka ny rehetra!
Mino aho fa afaka manaiky fa ny fiara fitateram-bahoaka rehetra Tsidika dia no-tsy! Indrindra fa rehefa mampitaha izany amin'ny fampiononana azonao amin'ny fiaran-dalamby. Tsy mbola resy lahatra momba ny inona no fomba haingana ny mandeha any Eoropa mbola? Vakio amin'ny!
Inona no fomba haingana ny mandeha any Brussels:
Ny fomba tsara indrindra Travel from Brussels dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Tapakila dia azo namandrika amin'ny alalan'ny Save A Train ao anatin'ny minitra tsy misy miafina sarany. Bruxelles dia mahavariana toerana amin'ny mahatalanjona trano ary ny tantara mahavariana hipoka any an-kalalahana rehetra sy ny alleyway.
Brussels tena manana zavatra ho an'ny rehetra sy manome Eoropa foto-tsakafo toy ny zavakanto sy ny trano miaraka bebe kokoa tsy mahazatra attractions. Aza mitsidika Bruxelles raha amin'ny sakafo toy ny fries, Atala, ary labiera ho ela ianao po. Ny tsara indrindra momba ny Brussels dia izany ihany koa ny Super azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby ary afaka mitsidika tanàna hafa ao Eoropa mora foana sy haingana. Izahay no nanao ny kajy ho anareo 😉
Travel from Bruxelles ho any Paris
The niala Bruxelles any Paris Azo vita lamasinina in fotsiny eo ambany 1:30 H. Matetika mivantana fiarandalamby hiala Brussels tonga amin'ny Paris’ Gare du Nord mandritra ny tontolo andro. Sidina avy any Bruxelles ho any Paris’ Charles de Gaulle Airport haka ny 5 ora seranam-piaramanidina, raha miandry fotoana dia nalaina ho fiheverana.
Ampiofano Avy Bruxelles ho any Paris Time – 1:22 H
Time Voavonjy: 4:08 H
Travel from Bruxelles ho any London
The niala Bruxelles any London Azo vita tamin'ny fotsiny ny 2 ora. Ny fomba haingana indrindra fitaterana dia nandeha lamasinina, amin'ny matetika mivantana Eurostar fiarandalamby tonga tany Londres ny St Pancras-peo mandritra ny tontolo andro. Sidina avy any Bruxelles ho any London Heathrow Airport haka ny 5 ora seranam-piaramanidina, raha miandry fotoana dia raisina.
Ampiofano Avy Bruxelles ho any London Time – 2:18 H
Time Voavonjy: 3:18 H
Travel from Bruxelles ho any Amsterdam
Traveling avy Bruxelles any Amsterdam maka fotsiny eo ambany 2 ora lamasinina. Matetika mivantana fiarandalamby tonga amin'ny Amsterdam ny Central Station mandritra ny tontolo andro. Sidina avy any Bruxelles ho any Amsterdam ny Schiphol Airport maka 5 ora seranam-piaramanidina, raha miandry fotoana dia nalaina ho fiheverana.
Ampiofano Avy Bruxelles ho any Amsterdam Time – 1:50 H
Time Voavonjy: 3:15 H
Travel from Bruxelles ho any Lyon
Ny niala tao Bruxelles ho any Lyon maka eo ho eo 3:30 H. Ny haingana indrindra dia fomba fitaterana mandeha lamasinina, amin'ny matetika mivantana fiarandalamby tonga tao Lyon nandritra ny andro. Sidina avy any Bruxelles ho any Lyon haka latsaka kely 6 ora rehefa fitaterana sy ny seranam-piaramanidina miandry fotoana dia hita.
Ampiofano Avy Bruxelles ho any Lyon Time – 3:29 H
Time Voavonjy: 2:21 H
Travel from Bruxelles ho any Frankfurt
Mitaky fotsiny ny 3 ora mba handeha lamasinina avy any Bruxelles ho any Frankfurt. Mivantana fiarandalamby tonga ao Frankfurt matetika mandritra ny andro. raha oharina, flights from Bruxelles ny Frankfurt maka 5 seranam-piaramanidina, rehefa fitaterana ora ny fotoana dia nentina tany fiheverana.
Ampiofano Avy Bruxelles ho any Frankfurt Time – 3:05 H
Time Voavonjy: 2:10 H
Inona no fomba haingana ny mandeha any Frantsa:
Izay tsy tia Frantsa? Efa voasoratra maro be izahay bilaogy tsara indrindra tamin'ny faritra Frantsa. From toro-hevitra ho an'ny nandeha lamasinina avy any Paris ho any Nice to Where you can hahita ny tsara indrindra frantsay fries any Frantsa na Michelin Star trano fisakafoanana ao Frantsa raha tianao. Raha tsorina dia, ianao iany te-hahazo any raha vao araka izay azo atao! Ny haingana fomba ahatongavana any? Lamasinina mazava ho azy!
Train mandeha any Frantsa no fomba mahomby indrindra ny handeha avy any Paris any amin'ny tanàna hafa any Frantsa. Travel from Paris to the south of France–albeit a bit pricey–is best done by train; fiaramanidina sy ny fiaran-dalamby vidin-javatra izay miavaka dia ampy, fa fiaran-dalamby mandeha dia mainka ny manahirana.
Raha mandeha bisy na mitaingin-anjara dia mora kokoa, ny habetsahan'ny ora izany dia maka dia tsy azo ampiharina fotsiny. Ny fomba haingana ny mandeha any Eoropa foana lamasinina, ary mahazo manodidina hafa Frantsa tsy!
Ireto ny fotoana ohatra fahavaratra:
Amsterdam ho any Paris
Ny niala tao Amsterdam ho any Paris azo vita tamin'ny eo ho eo 3.5 ora. Ny fomba mandeha haingana dia fiaran-dalamby haingam-pandeha, amin'ny matetika mivantana fiarandalamby tonga tao Amsterdam Centraal Station mandritra ny tontolo andro. Flights from Paris’ Charles de Gaulle Airport ho Amsterdam ny Schiphol Airport mandray eo ho eo 4 ora rehefa alalan'ny terminal miandry fotoana dia raisina.
Ampiofano Avy Amsterdam ho any Paris Time – 3:26 H
Time Voavonjy: 0:39 H
Travel from London ho any Paris
Afaka mameno ny diany eo amin'ny Fanjakana sy ny frantsay kapitaly in fotsiny ny 2 ora. Ny fomba mandeha haingana dia haingam-pandeha fiaran-dalamby avy any St. Pancras Station. Hahita matetika mivantana fiarandalamby tonga tao Paris’ Gare du Nord mandritra ny tontolo andro. Flights from London ho any Paris mandray eo ho eo 4 ora seranam-piaramanidina, raha miandry fotoana dia raisina.
Ampiofano Avy London ho any Paris Time – 2:16 H
Time Voavonjy:1:41 H
Train Travel no fomba tsara indrindra mba hahazo fitaterana avy amin'ny tanàna iray hafa any Holandy. Prices are relatively inexpensive as you can book a ticket through the Save A Train website avy any Amsterdam ho any Rotterdam ho eo 15 euro sy Amsterdam ho an'ny Hague (Den Haag Central) fa manodidina 11 euro.
Travel from Amsterdam ho any Dusseldorf lamasinina:
Mitaky eo ho eo 2 ora mba handeha eo Amsterdam Dusseldorf lamasinina. Matetika mivantana fiarandalamby Amsterdam Central tonga amin'ny gara mandritra ny tontolo andro. Flights from Dusseldorf ho any Amsterdam ny Schiphol Airport haka ny 3 ora.
Ampiofano Avy Amsterdam ho Dusseldorf Time – 2:13 H
Time Voavonjy: 0:57 H
Zavatra tsy mandainga! Ny fotoana miresaka tahiry ho an'ny tenany! The quickest mode of travel in Europe is by Train. Lohany eo eo ny Vonjeo A Train tranonkala mba hahita ny tsara indrindra vidin-javatra, in segondra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fquickest-mode-travel-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#airtravel #manidina #mode of travel eurostar trainjourney Train Travel fiaran-dalamby nankany